प्रधानमन्त्रीसँग चीन को को जाँदैछन् ? यस्ताे छ एजेण्डा « Janata Samachar
प्रधानमन्त्रीसँग चीन को को जाँदैछन् ? यस्ताे छ एजेण्डा
प्रकाशित मिति : 13 June, 2018 5:38 pm
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार ५ गते हुने चीन भ्रमण टाेलीकाे टुङ्गो लागेकाे छ । भ्रमण टाेली बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको हाे ।
भ्रमण टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायत जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथ धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि चीन भ्रमणमा जानुहुने भएकाे छ । चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङका साथै चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङ लगायतका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री अाेलीकाे भ्रमण नेपाल र चीनबीच पहिला भएका सम्झौता र समझदारी कार्यान्वनकाे लागि हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ । मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणमा थप सम्झौता तथा समझदारी समेत हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा नेपाल चीन बिजनेस फोरम र थिंक ट्यांकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै ल्हासाको भ्रमण समेत कार्यक्रम तय भएकाे छ ।
यस्ताे छ भ्रमण एेजेण्डा
चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रेलमार्गदेखि उर्जा सहयोगसम्मका विषयमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका ओलीेले यसअघिकाे भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो । पहिला भएका सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता डा भरतराज पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
चीन भ्रमणमा तातोपानीस्थित मितेरी पुल र रसुवागढीमा स्याफ्रुबेँसी जोड्ने पुल निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाबारे पनि छलफल हुनेछ ।
भ्रमणमा ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याडिङ) हुने सम्भावना छ ।
भ्रमणमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा छ । केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गलाई नै काठमाडौंदेखि पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनी जोड्ने योजना छ ।
नेपाल र चीनबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता (बिप्पा)का विषयमा बिप्पाका विषयमा ठोस समझदारी वा सम्झौता हुने सम्भावना छ । दुई देशबीच निजी क्षेत्रबीच ४० अर्बको संयुक्त लगानी बारे सम्झौता हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहितकाे भ्रमण टाेली असार १० गते स्वदेश फर्कनेछ ।